Mila Vehivavy Mpanitsy Maro Kokoa Ny Wikimujeres Mba Hampifandanjana Ny Isan’ny Lahy Sy Ny Vavy Ao Amin’ny Wikipedia · Global Voices teny Malagasy
Mila Vehivavy Mpanitsy Maro Kokoa Ny Wikimujeres Mba Hampifandanjana Ny Isan'ny Lahy Sy Ny Vavy Ao Amin'ny Wikipedia
Voadika ny 03 Mey 2017 6:03 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, polski, Français, Português, English, ଓଡ଼ିଆ , Aymara, Esperanto , မြန်မာ, македонски, Italiano, English
Ny hala tahak'ilay peta-drindrina malaza “Vitantsika Izany!”. Asa nindramin'i Tom Morris tao amin'ny Wikimedia Commons. Sehatra ho an'ny daholobe .
Milaza ny lahatsoratr'i Wikipedia miresaka ny “Fitongilanana eo amin'ny lahy sy ny vavy ao amin'ny Wikipedia” fa “lehilahy avokoa ny ankamaroan'ny mpanitsy ao amin'ny Wikipedia” rehefa natao ny fandalinana sy ny fanadihadihana maro izay nanononany antontanisa manodidina ny 85-91.5% hatraiza hatraiza. Izany no antony mahatonga ny ahiahin'ny vondrom-piarahamonina amin'ny ankapobeny sy ny Orina Mpanasoa Wikimedia, fikambanana mitantana ny rakibolana maimaimpoana an-tserasera lehibe indrindra manerantany, satria mety hahatonga ny fitongilanana miverimberina hita ao anaty votoatiny ity tsy fitoviana amin'ny isan'ny lahy sy ny vavy ity .
Miasa amin'ny teny Espaniola sy amin'ireo firenena miteny Catalan ny tetikasa Wikimujeres (Wikivehivavy) mba hanampiana amin'ny fanovana ny isan'ny lahhy sy ny vavy. Araka ny voalazan'ny tranonkala hoe:
Vondrona mpisera Wikipedia izay voakasika momba ny fahasamihafana sy ny tsy fitongilanan'ny Wikipedia na amin'iza na amin'iza izahay ary vonona izahay ny hiasa mba hampihena (sy hanafoana amin'ny hoavy) ny fanavakavahana misy eo amin'ny lahy sy ny vavy sy ny hantsana eo amin'ny kolontsaina izay misy eo amin'ny rakibolana be mpitsidika indrindra ato amin'ny Aterineto.
Ny hampiditra vehivavy maro kokoa ho mpanitsy mavitrika izay afaka mandray anjara bebe kokoa amin'ny votoaty mifandraika amin'ny vehivavy toy ny tantaram-piainana ihany koa ny tanjon'izy ireo, ary koa ny votoaty noforonin'ny vehivavy mpanitsy momba ireo firenena andalam-pandrosoana. Tontosaina isan-kerinandro ny fivoriana ao amin'ny toerana roa ao Madrid sy Barcelona, mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny endriky ny fiofanana sy ny “edit-a-thons,” na “hazakaza-davitra fanitsian-dahatsoratra” ny asa fanentanana izay nokarakaraina, matetika izany no hetsika hifanatrehan-tava izay natao hiasana miaraka amin'ny fananganana na fanatsarana ny lahatsoratra Wikipedia vaovao .
Sary avy amin'ny Montserrat Boix tao amin'ny Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Ny hazakaza-davitra fanitsian-dahatsoratra natao faramparany dia nifantoka tamin'ny fanampiana lahatsoratra vaovao momba ny vehivavy mpaka sary sy ny vehivavy mpahay siansa nokarakarain'ny Wikimujeres miaraka, ary natao tao amin'ny Medialab-Prado tao Madrid.